यस्ती पो श्रीमती !श्रीमानले मलेसियामा कमाएको बचाउँछिन , लुगा सिलाएर घर खर्च चलाउछिन ! - Nepal Insider
Home/समाचार/यस्ती पो श्रीमती !श्रीमानले मलेसियामा कमाएको बचाउँछिन , लुगा सिलाएर घर खर्च चलाउछिन !
एक लाख रुपैयाँ ऋण गरेर जानुभएको थियो त्यो तिरिसक्नुभयो । अब केही बचाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले म पनि उहाँको कमाइ घरखर्चमा खर्च गर्नु नपरोस् भनेर काम गरिरहेको छु । सिलाइको कामबाट छोरीहरु र मलाई खर्च पुर्‍याउँछु । हिजोआज वित्तीय साक्षरता कक्षामा पनि बस्छु । यो कक्षामा बस्न थालेदेखि मैले झन पैसाको महत्व बुझेको छु । कहाँ, कसरी पैसा लगानी गर्ने, कसरी बचत गर्ने भन्नेकुरा पनि सिकेको छु ।अब दुई जना मिलेर काम गर्ने हो । मैले कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउने र उहाँको कमाइ बचत गरेर केही व्यापार व्यवसाय गर्न पुग्ने बचत भएपछि उहाँलाई पनि घरमै बोलाउछु । सबैकुरा बिस्तारै योजनाबद्ध रुपमा मिलाउँदै लैजान्छु ।
शिल्पा- छवि चौकीमा : ओझा भन्छन् कानको जाली फुटेको छैन(प्रत्यक्ष भिडियो सहित)
भाइरल बाबा पत्रकारमाथि नै झमटिए ! बलात्कारको आरोप बारे यसो भन्छन (हेर्नुस भिडियो)
१५ दिनदेखि पार्किङमा राखेको बसको छतमा लास भेटियाे
फेसबुके साथीको ‘सरप्राइज गिफ्ट’– ३० हजार पाउण्डको लोभमा २५ लाख स्वाह !….(पुरा बिवरण हेर्नुहोस्)